Geeddi ma ka dhegaystey "British Brodcasting Corporation" wixii ka dhacay deegaanka Fooljeex ee Qorraxey waxse mayskabeddeleen gefkiisii qaawanaa?
Maxammed Ibraahin ws wr wb
Wakhti badani kama soo wareegin markii geeddi lahaa majiraan dal iyo dad soomaaliyeed oo la gumaystaa ka dib markii ciidammada Ethiopia ay dab qabadsiiyeen deegaan iska dhan iyagoo aan kala soocin maato iyo rag, dembiile iyo dembilaawe.
Itoobiyaanku weligood maalin kama qadin xasuuqa iyo dilka dadka Soomaaliyeed laakiin tan waxaad moodaysey in ay jawaab degdeg ah Tikreegu siinayeen Geeddi oo ay lahaayeen Geeddi ha qaldamin waa jiraa dad Soomaaliyeed oo la gumaystaaye.
Weligeedba waa jirey nin dhuuni qaate ah oo kula midab iyo af ah oo cadawgu adeegsado isagoo mansab ka raadinaya laakiin waxaan aad ulayaabay hadalkii geeddi ee nin kasta oo damiir leh anfariirka ku ridey ragga ku tilmaamay hadal geesinimo leh oo weliba cilmi ku qotoma( cajiib ), kuwaa waxaan ku tilmaamo ma garanayo oo aan ka ahayn dameeri dhaan raacday.
Haddaba su’aashu waxay tahay Geeddi iyo kuwa la ra’yiga ahi hadda ma garwaaqsadeen gefkooda ka dib markay tusaale cad ka bixiyeen Itoobiyaanku Fooljeex/Qorraxey?
Ugu dambayn waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa in aynu nahay dad walaalo ah cid kastana iska xiga, waxaanan aamminsanahay in xitaa haddaynu toban ”Land” noqono oo mid kasta gooni loo ictiraafo aynaan meel kala tegayn oo aynu nahay dad aan wax kala teedayaa jirin.Taa waxaan uga jeedaa waar ha ku habsaamina S/weyn, S/land, P/land iwm oo innagu aynu isu dambayno ee aan marka hore cadawga il qudha ku wada eegno(haddii tu sare timaaddo tu hoose laga teg).